Itoobiya oo Israel ka iibsatay Barnaamij ay ku basaasto Shacabka iyo dalal kale | Kalshaale
Itoobiya oo Israel ka iibsatay Barnaamij ay ku basaasto Shacabka iyo dalal kale
Dec 12, 2017 - 1 Aragtiyood
Muqdisho (Kalshaale) Warbixin ay soo saareen cilimi-baarayaal waaxda (Citizen Lab) ee ka tirsan Jaamacada Toronto ee dalka Canada ayaa lagu soo bandhigay barnaamijyada Internetka oo ay dowlada Itoobiya kasoo iibsatay shirkad laga leeyahay Israel oo ka ganacsata barnaamijyada dadka, shirkadaha iyo dowladaha lagu basaaso.
Xabashidu weligeed ka gudbi mayso , dib jirnimo, badownimo iyo caqli gumaysi nijaaseed iwm.
Xogta ka qarsoon maanta dadka diidan maxay tahay. Dalka gudihiisa ayaa laysku jafayaa waxa qarsoon muxuu yahay?
Ma OLF Oromia iyo ONLF ayaa hadalkooda qarsoon yahay?
Yahuudda waxay weligeed suuq ka heshaa nacas African ah oo aanan garanayn hab raaca ticknoolojiyada iwm.
Haddii ay odhan lahaayeen saldhig millitari ayaannu siinnay dadku wax bay odhan lahaayeen laakiin nacas madow oo wax meedhiyo keliya garanaya ayaa soo qadaad wayn meesha.